Budada Turinabol (Tbol) (855-19-6) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Turinabol waa badeeco si weyn loogu isticmaalo baaxada jirka. Dhamaan cayaartoyda tartankan ka qeybgalaya aad ayay u xoogan yihiin - ku dhowaad "aad u sarreeya" waxaan dhihi karnaa - tababaro oo aad u sarreeya - hadafyo aan ku xirnayn "aan la qaadi karin".
Hadafkooda koowaad waa ciribtirka unugyada adipose iyo horumarinta unugyada muruqyada oo ay weheliyaan miisaanka jidhka oo sareeya iyo jirka.
Turinabol waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee ku jira jirka, sababtoo ah steroid aad u xoog badan ayaa fududeynaya tababarkan wuxuuna sameynayaa dhammaan himilooyinka ku dhawaad ​​"suurtagal".
Daawada budada Turinabol (Tbol) (855-19-6)
Macmacaanka Turinabol (Tbol) budada (855-19-6) Sharaxaad
Kareem Turinabol (Tbol) budo waa stabto anabolic oo ah nooc ka mid ah testosterone.Kuulada Turinabol (Tbol) budada ah, isbeddel ah kaas oo daroogada ka dhigaya unug xooggan oo xoog leh oo leh awood dherer ah oo leh awood yar oo qufuc leh. clostebol acetate waa qaab anabolic oo daciif ah oo bixiya waxoogaa yar marka loo eego awoodda dhisida muruqyada. natiijooyinka ay arkeen dadka isticmaala daroogadaan waxay la mid yihiin kuwii arkay muuqaallo afka ah ee primobolan, inkasta oo aysan ahayn mid xoog badan oo muuqda.
clostebol acetate uma beddelayso estrogen, halkaasna waxaa ku jira saameynta daawooyinka estrogenic sida bacda ileyska biyaha iyo gyno ma aha arrin oo dadka isticmaala uma baahna inay ka walwalaan qaadashada xeryaha anti estrogen sida arimidex ama aromasin. clostebol acetate waxay leedahay qaar ka mid ah sifooyinka xooga iyo korriinka; Sidaa daraadeed, saameynaha astaamooyinku waa suurtagal marka la isticmaalayo daawooyinka steroid ee qiyaasta sare. Dhibaatooyinka ifrogenic waxaa ku jiri kara waxyaabo ay ka mid yihiin maqaar madow, finan, iyo kordhinta korriinka wajiga iyo timaha jidhka. sababtoo ah ma lahan wax firfircoon ootrogen, laakiin waa mid dhexdhexaad ah, oo dadka isticmaala ee dhismahani waxay filan karaan muruqa heley si uu u helo tayo wanaagsan. Sababtoo ah, clostebol acetate ayaa loo isticmaali doonaa jir-dhisayaasha oo u dhow bandhig, ama cayaaraha cayaaraha xawaaraha ama miisaanka ay jimicsiayaan isboortiga.
Dufanka Turinabol (Tbol) budada (855-19-6) Smamnuucista
Product Name Nooca budada Turinabol (Tbol)
Magaca Kiimikada Clostebol acetate; 855-19-6;
brand NAme Qalabka steroid
Lambarka MDL MFCD00079075
Molecular Wsideed 364.91 g / mol
barafku Psaliid 227.0 ilaa 231.0 deg-C
Khaas ah 108 iyo le 119 deg
Application Kalluunka Turinabol (Tbol) budada waa anabolic anabolic kaas oo ah nooc ka mid ah tijaabadae
Waa maxay budada Turinabol (Tbol) (855-19-6)?
Turinabol waa daaweyn anabolic steroid ah, oo si ballaaran loo isticmaalo kuwa ku lugta leh jidh-dhiska jirka, sida taageerayaasha iyo cayaartoyda cayaarkan gaarka ah waxay ku-tababbaran yihiin "manhaj dheeri ah" oo ay ka mid yihiin jimicsiyo adag si ay u gaaraan ujeedooyinkooda sare.
Waxay inta badan ka walwalsan yihiin in laga tirtiro unugyada dufanka leh iyo si loo hormariyo unugyada muruqyada, taasoo keentay koror weyn oo ah miisaanka jirka iyo khadka b.
Turinabol wuxuu ka mid yahay siyaabaha ugu sareeya ee doorashooyinka jirka ee maaddooyinka tan iyo markii loo arko in uu yahay midka ugu awooda badan ee anabolic stereo, tababarka u muuqda mid aad u sahlan oo wax walba suurtagal ma ahan in la gaaro suurta galnimada.
Sidee budada ah Turinabol (Tbol) (855-19-6) shuqullada
Turinabol (2446-23-3) wuxuu saameyn togan ku yeeshay xajinta nitrogen iyo dheellitirka borotiinka iyo sidoo kale kordhinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas cas ee jirkaada. Dhanka kale, unugyada dhiigga cas ee mas'uul ka ah bixinta unugyada jirkaaga ee leh oksijiin adiga oo dhiigaaga isticmaalaya. Inta badan unugyada cas ee casriga ah ee nidaamka jirkaaga ayaa ah mid ka mid ah bixinta oksijiin iyo nafaqo qaybo kala duwan oo jirka kor u qaadaya murqaha jirka. Dhammaan waxqabadyada jirka waxay muhiim u yihiin jirkaaga sida ay u hagaajinayaan muruqyada iyo sidoo kale kor u qaadista unugyada. Tani waa sababta dhalinyaro badani ay wali door bidaan Oral Turinabol oo ku jira steroids kale.
Sida dhammaan alaabada steroid, sidaas darteed Turinabol, waa in si fiican loo qaato wakhti wakhti.
Sidaa daraadeed, muddooyinka ka-noqoshada iyo mudada ka-dhaafitaanka alaabta waa in la raaco.
Nidaamka caadi ah ee qaadashada Turinabol badanaa wuxuu ku saabsan yahay 30 mg maalintii oo loogu talagalay 1 illaa 12.
Dufanka Turinabol (Tbol) budada (855-19-6) faa'iidooyinka
Turinabol stabtoorku wuxuu isticmaalaa jidh-dhisayaasha inta lagu jiro marxaladda jarista.
Faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee tababarka waa sidan soo socota:
waxay hagaajineysaa waxqabadka
waxay kordhisaa dulqaad
waxay xoojisaa baruurta
wuxuu difaacaa unugyada muruqyada dadka hunguri-baaga ku dhaca
wuxuu helaa waqtiyo raysasho fiican
kor u qaadista awooda
hagaajinta xaaladaha murqaha sababtoo ah hoos u dhaca SHBG
Soo iibso Turinabol (Tbol) budada laga bilaabo Buyaas.com